မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ မတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညပိုင်းက နေအိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုတချို့ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ RFA က စုံစမ်းသိရပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း တပ်ကုန်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ အနော်ရထာရပ်ကွက်မှာ ဗလီတစ်ခုအပါအဝင် အိမ်ငါးလုံး ဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက် နေပြည်တော်က ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုပါခေါ်ယူပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနေရတယ်လို့ အဲဒီနေရာကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက RFA ကို ပြောကြားပါတယ်။
"ဒီနေ့ည သူတို့လာဖျက်စီးလို့ ဗလီတစ်လုံးအပါအဝင် အိမ်လေးငါးခြောက်လုံးပါသွားတယ်။အခုတော့ သက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေ ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းလို့ ငြိမ်သွားပါပြီ၊ ရဲတပ်ရင်းတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့၊ နေပြည်တော်ဘက်က ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ တော်တော်များများလာကြပါတယ်"
မနေ့ညကပဲ အမည်မသိ လူအုပ်စုတွေက ရွာသစ်ကြီးကျေးရွာ အနော်ရထာရပ်ကွက်၊ မြဝတီရပ်ကွက်နဲ့ ဗိုလ်မင်းရောင်ရပ်ကွက်တွေမှာ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်ပွားအောင် လှုံ့ဆော်သွားခဲ့တယ်လို့ တပ်ကုန်းမြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"လုံခြုံရေးရောက်သွားတဲ့နေရာဆို သူတို့က ထွက်ပြေးတယ်၊ ဟိုဘက်ဝိုင်းလိုက်၊ ဒီဘက်ဝိုင်းလိုက် အဲ့လိုဖြစ်နေတာ၊ အနော်ရထာရယ်၊ မြဝတီရယ်၊ ဗိုလ်မင်းရောင်ရယ် ဒါလောက်ပဲ"
ပဲခူးတိုင်း အုတ်ဖိုမြို့နယ် အိုးသည်ကုန်းကျေးရွာမှာလည်း အမည်မသိ လူအုပ်စုတွေ ဝင်ရောက်လာပြီး ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေတာရှိတဲ့အတွက် နယ်မြေခံ စစ်တပ်အကူအညီနဲ့ သွားရောက် ထိန်းသိမ်းနေတယ်လို့ သာယာဝတီခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိတဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
"ကျတော်သိသလောက်ကတော့ သူတို့ဆီမှာသွားတာ အရပ်သားတွေက နည်းနည်းစုနေလို့ ကျတော်တို့ဆီကနေ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ စစ်တပ်တွေ အင်အားနဲ့ သွားဖြေရှင်းလိုက်တော့ ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျ၊ ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူး"
မန္တလေးတိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းတွေမှာ စနေ့နေ့ ညက ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ ဆူပူမငြိမ်မသက်မှု သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ကို မီးပေါ့ဆမှုနဲ့ ရဲက တရားစွဲဆို
မန္တလေး ဝန်ကြီးချုပ်အိမ် နဲ့ ဈေးချိုဟိုတယ် မီးလောင်
ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့ မန္တလေးမြို့ခံတွေရဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ
ဆွာချောင်းတမံ ရေဘေးဒဏ်ခံရွာတွေ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ပဲခူးတိုင်း ရွှေကျင်မြို့က ရေဘေးဒုက္ခသည်များ
Why those unknown people always threaten to make riots for long time without they could be found out. This is not simple and sincere. This is something crook.
Mar 27, 2013 06:57 AM
ဒေါက်တာချက်ကြီးကဒီအမူမတိုင်ခင်ထဲက INTRO ၀င်နေတာကြာပြီ အခုအဓိကရုဏ်းလည်းဖြစ်ရောချက်ကြီးဆိုတဲ.လူသ.ူweb site ကိုပိတ်ပြီးstay ရှောင်သွားပြီး
Mar 25, 2013 09:21 AM
It's funny. Always says all ok,ok. But those innocent people homes has already destroyed. Funny CID, no worth to pay them salary. Can't arrest till now. Who should we rely or do we need to wait till the whole country burnt down.
Mar 25, 2013 06:46 AM